Columbus Ohio: Wacyi-galin loo sameynayo dhalinyarada isticmaasha Daawooyinka daroogada ah. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Columbus Ohio: Wacyi-galin loo sameynayo dhalinyarada isticmaasha Daawooyinka daroogada ah.
Columbus Ohio: Wacyi-galin loo sameynayo dhalinyarada isticmaasha Daawooyinka daroogada ah.
Kulankaan looga hadlayey dhalinyarada isticmaasha daawada xad dhaafka ah (Overdose) ayaa lagu qabtay magaalada Columbus Ohio Manta, waxaana soo abaabulay qaar kamid ah waalidiinta magaaladaasi, gaar ahaan Ramlo Jama oo ah Hooyo Caruur ugu dhalatay Mareykanka, isla markaana ka damqatay dhibaatada haysata dhalinyarada.
Bishii la soo dhaafay oo kaliya seddex dhalinyaro Soomaali ah ayaa u dhimatay isticmaalka daawadaa xad dhaafka ah halka kuwo kale ay la ildaranyihiin dhibaatada ka soo gaartay.
In kasta oo lagu jiro xilli adag oo dadku ka wal-wal sanyihiin Coronavirus, hadana kulankaan waxaa qeyb ka ahaa waalidiin haween u baddan iyo dhalinyaro, waxaa dhankooda ka qeyb qaadanayay xubno ka socday Hay’adaha caafimaadka Columbus Ohio.
Waaxda caafimaadka ayaa Tibaaxay in dhalinyarada u dhexeysa 16 ilaa 24 gabi ahaan dalka Mareykanka ay halis ugu jiraan isticmaalka daawada xad dhaafka ah, waana cabsi la soo daristay qoys walba.
Muhiimada kulanka ayaa ahaa waalidiinta gaar ahaan Hooyooyinka iyo Ilmaha in laga dhex abuuro is faham sababi kara in ilmaha aysan sii fogaan oo haddii qalad lagu arko la soo dhaweeyo, si dagan oo naxariis ku jirtana looga saaro, waana mid ku adag waalidiinta Soomaalida oo dhaqan ahaan Canaan iyo qeylo Ilmaha ku wajaha waana horseedka in ilmuhu guryahooda ka cararaan una galaan kuwo aan ka naxayn.
Previous articleRa’iisul wasaare ku xigeenka oo xilka u kala wareejiyey qaar ka mid ah wasiirradii dhawaan la magacaabay.
Next articleMadaxweyne ku-xigeenka Puntland oo soo xiray shirka mashaariicda deegaannada maamulkaasi+Sawirro